လမင်းခင်: November 2009
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးနှင့်အသိဥဏ်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာကဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ.အစည်းကို " ကမ္ဘာမှာအမွန်မြတ်ဆုံး အကောင်းဆုံး " ဘာသာတရားဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း
အင်မတန်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူ သင့်ကြောင်းနှင့် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ ထက် မိမိကိုယ်တိုင်
လေ့လာ စမ်းစစ်ပြီး လက်တွေ့ ကျသောတရားများကို သိမြင်လာသူများက မိမိဘာသာမဟုတ်သော်
လည်း ဤသို့ ထောက်ခံ မဲပေးခဲ့ကြသည်ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း ၏တန်ဖိုးကို
မိမိတို့ ကိုယ်ကိုယ်မြှင့်တင်ပေးကြဖို့။။ မေအိခင်(လယ်ဝေး)
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဂျနီဗာမြို.အခြေစုိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာရေးနှင်.အသိဥာဏ်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ.ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ.အစည်းကို " ကမ္ဘာမှာအမွန်မြတ်ဆုံး အကောင်းဆုံး " ဘာသာတရားဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်...အဆိုပါအထူးတစ်လည်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုကိုကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံမှကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော်ကရွေးချယ်ချီးမြှင်.ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပို၍၀မ်းမြောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာပါဝင်ရွေးချယ်သည်.ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အများစုကအဆိုပါအဖွဲ.အစည်းတွင်အဖွဲ.ခွဲဝင်အနည်းဆုံးဖြစ်သောဗုဒ္ဓဘာသာကိုမိမိတို့ဘာသာထက်ကျော်လွန်ပြီးဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်...ပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သူလေးဦးကပြောဆိုခဲ့ရာတွင်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီး၏သုတေသနညွန်ကြားရေးမှူး Jonna Hult က " ဒီကမ္ဘာ.အမွန်မြတ်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးဘာသာတရားဆုကိုဗုဒ္ဓဘာသာက ရရှိတာအံ့သြစရာမရှိပါဘူး...ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး...တစ်ခြားဘာသာများနဲ့မတူတာကအဲဒါပါပဲ...တစ်ခြားဘာသာတွေကအကယ်၍ဘုရားသခင်သာမှားယွင်းခဲ့ယင်ဆိုတဲ.အတွေးနဲ့လက်နက်တွေကိုအရံသင့်ထားကြပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ(ဘာသာရေးအတွက်နဲ့) စစ်တိုက်တာကိုတွေ့ရဖို့အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်...တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေရဲ.အစဉ်အလာအလေ့အထနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံတဲ့တရားကိုသာသူများကိုဟောကြားခဲ့တာပါပဲ " လို.ဆိုခဲ့ပါတယ်...Belfast မြို.မှ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Ted O'Shaunghnessy ကတော.ကက်သလစ်သာသနာကိုမြတ်နိုးကိုကွယ်ပေမယ်.လူသားတွေကိုမေတ္တာဂရုဏာထားရန်ဟောကြားပြီးလူသားတွေကိုပဲသတ်ဖြတ်ကာဘုရားသခင်ရဲ.အလိုဆန္ဒနားလည်ပါတယ်လို.ပြောကြတာကစိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲ...ဒါကြောင်.မွန်မြတ်တဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဲပေးခဲ.တာပါလို.အမိန်.ရှိခဲ.ပါတယ်....ပါကစ္စတန်ကမွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်Tal Bin Wassad ကလည်းဒီအဆိုကိုသဘောတူထောက်ခံခဲ.ပါတယ်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးရဲ.ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမွတ်စလင်အစည်းအရုံးဆိုင်ရာမဲပေးရေးအဖွဲ.၀င်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ.သူက " ကျွန်တော်ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ...သို.သော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာခံစားချက်ထက်ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအမျက်ဒေါသတွေထွက်ကြ၊သွေးမြေကျကြရတာတွေကိုတွေ.မြင်ခံစားရပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့အဲဒါကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်...ပြောရယင်ကျွန်တော့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ချိူ.ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ "လို့ပြောခဲ့ပါတယ်...အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို.ကဂျူးဘုန်းတော်ကြီး Shmuel Wasserstein ကတော့" ကျွန်တော်လဲကျွန်တော့်ဘာသာဖြစ်တဲ့ဂျူဒါအစ်ဇင် ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်...ကိုယ်.ဘာသာမို့ကိုယ် ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးဘာသာတရားလို့လည်းထင်ပါတယ်...ဒါပေမယ်.ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရယင်ကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်ဂျူးဘာသာအရ၀တ်မပြုခင်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကပါ...ဒါကြောင့်အခုလိုမဲပေးလိုက်ပါတယ် " လို.ပြောလိုက်ပါတယ်...သို.သော်..စိတ်မကောင်းစရာအချက်တစ်ခုက အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးအနေဖြင့်ထိုဆုကိုလက်ခံမည့်သူတစ်ယောက်ကိုမျှမတွေ့ခဲ.ရပေ....သူတို.ဆက်သွယ်ပြောဆိုသမျှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကထိုဆုကိုလက်ခံဖို.ငြင်းပယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်...အဘယ်ကြောင့်ထိုဆုကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ရကြောင်းမေးမြန်ခဲ့ရာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဘုန်းတော်ကြီးဂုရတ္တက " ယခုလိုမိမိတို.ဘာသာကိုအသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ...သို.သော်ဒီဆုကိုအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုနိက္ခမဓါတ်၊နိဗ္ဗာနဓါတ်ကြိုးစားအားထုတ်ကာရရှိနိုင်သည့်လူသားအားလုံးကိုမိမိတို့မျှဝေပေးအပ်ပါကြောင်း..." မိန်.ကြားခဲ့ပါတယ်...အဖွဲ.ကြီးအနေနဲ့ထိုဆုကိုလက်ခံရယူပေးမယ့်သူကိုဆက်လက်ဆက်သွယ်နေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်....မူရင်းပို့စ်ကို ဒီမှာ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်၊ ဂူဂဲလ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်များစွာကိုလဲ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်၊...အဆိုပါအထူးတစ်လည်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုကိုကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံမှကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော်ကရွေးချယ်ချီးမြှင်.ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပို၍၀မ်းမြောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာပါဝင်ရွေးချယ်သည်.ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အများစုကအဆိုပါအဖွဲ.အစည်းတွင်အဖွဲ.ခွဲဝင်အနည်းဆုံးဖြစ်သောဗုဒ္ဓဘာသာကိုမိမိတို့ဘာသာထက်ကျော်လွန်ပြီးဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်...ပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သူလေးဦးကပြောဆိုခဲ့ရာတွင်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီး၏သုတေသနညွန်ကြားရေးမှူး Jonna Hult က " ဒီကမ္ဘာ.အမွန်မြတ်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးဘာသာတရားဆုကိုဗုဒ္ဓဘာသာက ရရှိတာအံ့သြစရာမရှိပါဘူး...ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး...တစ်ခြားဘာသာများနဲ့မတူတာကအဲဒါပါပဲ...တစ်ခြားဘာသာတွေကအကယ်၍ဘုရားသခင်သာမှားယွင်းခဲ့ယင်ဆိုတဲ.အတွေးနဲ့လက်နက်တွေကိုအရံသင့်ထားကြပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ(ဘာသာရေးအတွက်နဲ့) စစ်တိုက်တာကိုတွေ့ရဖို့အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်...တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေရဲ.အစဉ်အလာအလေ့အထနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံတဲ့တရားကိုသာသူများကိုဟောကြားခဲ့တာပါပဲ " လို.ဆိုခဲ့ပါတယ်...Belfast မြို.မှ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Ted O'Shaunghnessy ကတော.ကက်သလစ်သာသနာကိုမြတ်နိုးကိုကွယ်ပေမယ်.လူသားတွေကိုမေတ္တာဂရုဏာထားရန်ဟောကြားပြီးလူသားတွေကိုပဲသတ်ဖြတ်ကာဘုရားသခင်ရဲ.အလိုဆန္ဒနားလည်ပါတယ်လို.ပြောကြတာကစိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲ...ဒါကြောင်.မွန်မြတ်တဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဲပေးခဲ.တာပါလို.အမိန်.ရှိခဲ.ပါတယ်....ပါကစ္စတန်ကမွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်Tal Bin Wassad ကလည်းဒီအဆိုကိုသဘောတူထောက်ခံခဲ.ပါတယ်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးရဲ.ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမွတ်စလင်အစည်းအရုံးဆိုင်ရာမဲပေးရေးအဖွဲ.၀င်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ.သူက " ကျွန်တော်ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ...သို.သော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာခံစားချက်ထက်ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအမျက်ဒေါသတွေထွက်ကြ၊သွေးမြေကျကြရတာတွေကိုတွေ.မြင်ခံစားရပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့အဲဒါကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်...ပြောရယင်ကျွန်တော့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ချိူ.ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ "လို့ပြောခဲ့ပါတယ်...အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို.ကဂျူးဘုန်းတော်ကြီး Shmuel Wasserstein ကတော့" ကျွန်တော်လဲကျွန်တော့်ဘာသာဖြစ်တဲ့ဂျူဒါအစ်ဇင် ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်...ကိုယ်.ဘာသာမို့ကိုယ် ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးဘာသာတရားလို့လည်းထင်ပါတယ်...ဒါပေမယ်.ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရယင်ကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်ဂျူးဘာသာအရ၀တ်မပြုခင်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကပါ...ဒါကြောင့်အခုလိုမဲပေးလိုက်ပါတယ် " လို.ပြောလိုက်ပါတယ်...သို.သော်..စိတ်မကောင်းစရာအချက်တစ်ခုက အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးအနေဖြင့်ထိုဆုကိုလက်ခံမည့်သူတစ်ယောက်ကိုမျှမတွေ့ခဲ.ရပေ....သူတို.ဆက်သွယ်ပြောဆိုသမျှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကထိုဆုကိုလက်ခံဖို.ငြင်းပယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်...အဘယ်ကြောင့်ထိုဆုကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ရကြောင်းမေးမြန်ခဲ့ရာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဘုန်းတော်ကြီးဂုရတ္တက " ယခုလိုမိမိတို.ဘာသာကိုအသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ...သို.သော်ဒီဆုကိုအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုနိက္ခမဓါတ်၊နိဗ္ဗာနဓါတ်ကြိုးစားအားထုတ်ကာရရှိနိုင်သည့်လူသားအားလုံးကိုမိမိတို့မျှဝေပေးအပ်ပါကြောင်း..." မိန်.ကြားခဲ့ပါတယ်...အဖွဲ.ကြီးအနေနဲ့ထိုဆုကိုလက်ခံရယူပေးမယ့်သူကိုဆက်လက်ဆက်သွယ်နေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်....
Posted by LRDP at 9:00 AM 1 comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:50 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:42 PM0comments Links to this post
NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၏ နှင့် FWUBC တွေ့ ဆုံစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် FTUB ၏အဖွဲ့ ဝင် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံရှိFWUBC နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် သထုံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လည်းဖြစ် လူငယ်ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်သော ခွန်မြင့်ထွန်း တို့ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း နှင့်ပတ်သတ်၍ လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရမှုများအားလည်းကောင်းဆွေနွေး ခဲ့ကြပါတယ် ။
အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ကျမတို့သာသနာမှာ ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကိုဘုရား
ရှင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ ပဋိသန္ဓေ နဲ့ စုတိ တဲ့ကြားမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ မေး
ရင် လက်တွေ့ ကျတာတွေ သံသရာ အဆက်ဆက် ပါရမီပါအောင်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တာတွေ
ဟာသိတ်ကိုအဖိုးတန်တာပါပဲ။ ခု ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကိုကျမတို့ သာသနာ
အတွက် သိတ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆရာတော်ပါ ချဲထီ နှစ်လုံးထီတွေ နဲ့ လူတွေရဲ့လောဘကို
တိုးပွါးသွားစေမဲ့ အယူအဆတွေ ဗေဒင် ကိုယုံ နတ်ကိုပုံ သူတွေ ကို သတိ ထပ်ထပ်ကြပ်
ကြပ်သတိထားနိုင်ဖို့ ထေရ၀ါဒ သာသနာဆိုတာဘာလဲ ? ဆိုပြီးရှင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရဲ
ရဲတင်းတင်းဟော ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ပါ ။ဘယ်လဒ်လာဘ ကိုမှမမျော်ပဲ မိရိုးဖလာရိုရာနတ်တွေ ပူဇော်ပသမှုဟာ
ဘုရားဟောတရား နဲ့ သွေဖီနေတယ် ။ ၁၁၁ ပါးဆိုတဲ့ ၃၇ မင်း နတ်တို့ ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဟူပြီးဆည်းကပ်နေကြ
တဲ့အမှားတွေ ကိုဆရာတော် ထောက်ပြ နိုင်ခဲ့တယ် သံသရာမှာ အယူမလွှဲဖို့ ရာက နတ်စိမ်းတွေကိုသူတော်စင်
အထင် နဲ့ ကိုးကွယ်မှုအမှားတွေ ကိုမေတ္တာထားပြီးဟောခဲ့ တဲ့ထေရသာသနာတော်ကို အသက်ထက်ချစ်မြတ်နိုး
ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ပါ ။ ကျမ တို့ ကိုယ်တိုင် ပရိယတ္တိသာသနာကို လေ့ကျတ်မိပါမှ ထေရသာသနာရဲ့ အနှစ်စစ်စစ်
ကို နားလည်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ ဆရာတော်ကြီးကို သိတ်ကို နှမျောတသမိပါရဲ့ ။ဒါ့ကြောင့် ဖြူးဆရာတော်ကောင်းရာ
ဘုံမှတဆင့် နိဗန်မြတ်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး ဘုံစဉ်စံခါ စံဝင်နိုင်ပါစေ ။။
နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူ မင်းနိုင်သူ / ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉
နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိသည် ယနေ့နံနက် (၇) နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံကြီး၌ ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်သည်။“ဘန်ကောက်မှာ ဆေးကုပြီး တနင်္ဂနွေနေ့က ပြန်ကြွခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့မနက်တော့ ဆရာတော်ကြီး ပျံတော်မူသွားတယ်။ အန္တိမဈာပနအခမ်းအနားကို (၃၀) ရက်နေ့မှာ လုပ်မှာပါ” ဟု ရန်ကုန် ဖြူးမဟာစည်ရိပ်သာမှ သံဃာတော်တပါးက မိန့်သည်။ဖြူးဆရာတော်သည် လွန်ခဲ့သည့် (၂) နှစ်ခန့်က ကျောက်ကပ်အစားထိုး ကုသမှုခံယူထားရာမှ ကျောက်ကပ်သို့ ရောဂါပိုး ၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့် နိုဝင်ဘာ (၂) ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်ရှိ PRARAM-9 ဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသည်။“ဆရာတော်က နာမည်ကြီး ဓမ္မကထိက ဆရာတော်တပါးပါ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ တရားစစ်စစ်ကို သိနိုင်ကြဖို့ တနိုင်ငံလုံးကို လှည့်လည်ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ပါ။ နာမည်အကြီးဆုံး တရားကတော့ သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာ ဆိုတဲ့တရားပါ” ဟု ဘန်ကောက်မှ ဦးဓမ္မပါလက မိန့်သည်။ဆရာတော်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ပင်စိမ်းကင်းကျေးရွာတွင် အဘ ဦးဘလွင်၊ အမိ ဒေါ်ဒေါ်မေတို့မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ရာ ပျံလွန်တော်မူချိန်တွင် သက်တော် (၆၈) နှစ်၊ သိက္ခာတော် (၄၉) ၀ါ ရှိပြီဖြစ်သည်။ဖြူးမြို့ ရုံးကြီးရပ်ကွက်တွင် မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက်ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီးနောက် ဖြူးဆရာတော်ဟူ၍ ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ကာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းသို့ လှည့်လည်၍ တရားဓမ္မများ ဟောကြားခဲ့သည်။“ဆရာတော်ဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တရားတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဟောခဲ့တာပါ။ အယူလွဲစေမယ့် နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ပါ” ဟု ရန်ကုန်မှ ဒကာတဦးက ပြောသည်။အာဒိတ္တသုတ္တန်၊ ပဉ္စပုပ္ပနိမိတ္တသုတ္တန်၊ ပါရမီ (၁၀) ပါး အစရှိသည့် ကျမ်း (၁၅) စောင်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို့နယ်၌ ဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကို ထပ်မံတည်ထောင်ကာ ၀ိပဿနာ၊ ကမ္မဌာန်းတရားများ ပြသပေးခဲ့သည်။
Posted by LRDP at 6:49 AM2comments Links to this post
နအဖ ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကို အစီအစဉ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတာပါ။
“သူရာထောင်ချောက်”(နအဖ ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကို အစီအစဉ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတာပါ။ ပြည်သူတွေ ဆင်း ရဲမွဲတေလေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အဖက်ဖက်က ပျက်စီးနေလေ၊ သူတုိ့ရဲ့ အုပ်ချုပ် ရေးမဏ္ဍိုင်ခိုင်မြဲစေဖို့ ကျကျနန လုပ်ဆောင်နေတာက သေချာပါတယ်)။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ အလုပ်မရှိဈေးရောင်းဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်ကိုလိုက်နာကြတယ် ထင့်၊ နဲနဲလေးလူစည်တဲ့နေရာမှာ ဈေးသည်တွေဟာ ကြက်ပျံမကျပါပဲ၊ အဲဒီဈေး သည်တွေဆီကိုသွားတဲ့ (ဈေးဝယ်သူမဟုတ်) ပစ္စည်းငမ်းတဲ့ လူတွေကလည်း ကြိတ်ကြိတ်တိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလှတဲ့ ဈေးသည်က အ နည်းစုပါ။ အဲဒီအနည်းစုထဲမှာ အရက်ရောင်းတဲ့လူတွေလည်း ပါတယ်လေ။အရက်ရောင်းတဲ့ပုံစံတွေကလည်း အစုံပါပဲ၊ တချို့ကဟော်တယ်ကြီးတွေပေါ်မှာ ဘားကောင်တာတွေနဲ့ရောင်းတယ်။ ဒါလည် ရောင်းနေရတာပဲ၊ တချို့က ဘော လုံးပွဲရှိတဲ့နေ့ဆိုရင် ဟော်တယ်ဘားတွေမှာ အရက်သောက်ရင်း ဘောပွဲကြည့် ကြပါတယ်။ အရက်အကောင်းစားကို ငြိမ့်ငြိမ့်လေးသုံးဆောင်ရင်းနဲ့ ဘောလုံးပွဲ ကိုရင်ခုန်ခံစားကြတာပေါ့၊ တချို့ကြတော့ အရေးကြီးတဲ့ စီးပွားရေးကိစ္စတွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်ဘားတွေကို ရွေးချယ်ကြ တယ်။ ဒါကတော့ ရန်ကုန်မြိုရဲ့လူနည်းစုပါ၊ တကယ့်ကို လက်တဆုပ်စာ လူ နည်းစုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လာနဲ့ရှင်းရတဲ့ဘားတွေကတော့ ကိုက်ပါတယ်။နောက်တမျိုးကတော့ ဘီယာစတေရှင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကာရာအိုကေနဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေပေါ့၊ တချို့က မိန်းကလေးတွေပါ မွေးထား ပြီး လိင်ပါရောင်းချကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အဲဒီလိုမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး၊ လုပ်တယ်လို့လဲ နာမည်ထွက်မှာစိုလို့ သီးချင်းဆိုတဲ့ကောင်မ လေးတွေကို ကားနဲ့လိုက်ကြို လိုက်ပို့လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ၊ အဲဒီလိုဆိုင်မျိုးတွေက တော်ရုံလူတော့ ဖွင့်လို့မရပါ ဘူး။ ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း စစ်အုပ်စုနဲ့အပေးအယူရှိမှ ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါ။ ဒါတင်မကပါဘူး ရဲ၊ ကြံ့ဖွံ့ အစရှိသည်တို့နှင့် ပါ ဆက်ဆံရေးအသင့်အတင့်၊ အပေးယူအသင့်အတင့်တော့ ရှိရပါမယ်။အဲဒီဆိုင်တွေကလည်း မဆိုးပါဘူး၊ ရောင်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခုတော့ရှိပါတယ်။ သီးချင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတွေက ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကုံးစွပ်တဲ့ကိစ္စမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် စီမံထားရပါမယ်။ ကာရာအိုကေ ခေတ်ဦး တုန်းကတော့ အဲဒီလိုဆိုင်တွေမှာဆိုနေရင်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသ္မီးတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲဒီဆိုင်တွေမှာလာပြီ စားသောက်ကြတဲ့လူတွေကတော့ လူလတ်တန်းစား သုံးနိုင်စွဲနိုင်တွေလည်းရှိသလို၊ ပျော်ချင်တဲ့၊ ပျော်တတ်တဲ့ ကြေးရတတ် အဖိုးကြီးတွေလည်းပါပါတယ်။ ဒီဆိုင်တွေမှာက ဘီယာအပြင် တန်ဖိုးကြီးအရက်မျိုးစုံကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်း ရှင်တွေလည်း ပါမစ်ရဖို့အတွက် ရုံးကတာဝန်ရှိ အရာရှိကြီးတွေကို ဒီလိုဆိုင်တွေမှာ ဧည့်ခံကြရပါတယ်။ အရက်သောက်လိုက် ပန်းကုံး စွပ်လိုက်နဲ့ အရာရှိကြီးလုပ်သမျှကို လုပ်ငန်းရှင်က ကုန်ကျခံရတာကိုး၊ ပါမစ်လည်းရရော ကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်းထဲမှာ ဧည့်ခံစရိတ်ပါ ထည့်လိုက်တော့ ပါမစ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဈေးတက်သွားပါတော့တယ်။နောက်တမျိူးက ဘီယာစတေရှင်ပါပဲ၊ သိပ်အကြီးအကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကာရာအိုကေလဲ မပါတာများပါတယ်။ ပါခဲ့ရင်လည်း DVD နဲ့ ကိုယ်ဖာသာကို air con ခန်းတွေမှာဆိုကြတာပါ။ စတိတ်ရှိုးပါခဲ့ရင်တောင် နေ့စဉ်မဟုတ်ပဲ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ လောက်ကို ခပ်ပေါပေါအဆိုတော်တွေ ဆိုကြတာပါ။ အများအားဖြင့်တော့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာ များပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေကိုတော့ ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့လူတိုင်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ရဲကင်းကြေးပေးမယ်။ ကြံ့ဖွံ့ရန်ပုံငွေထည့်မယ်။ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ အလှူငွေတောင်းရင်လည်း ပေးရပါ တယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေလည်းမဆိုးပါဘူး ဝင်ငွေဖြောင့်ပါတယ်။ သူကဘီယာရောင်းမယ် ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်မျိုးစုံရောင်းမယ်။ ဒီလိုဆိုင် တွေဘယ်လောက်များများ သူ့ဖောက်သည်နဲ့သူ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ဘီယာစတေရှင်နဲ့ ဘိနဲ့ ရောဖွင့်ထားတာပါ။ ဒါမျိုး ကတော့ ပိုင်တဲ့လူရှိမှ ဖွင့်လို့ရမှာပါ။ သုဝဏ္ဏမြို့ပေါ် ဆန်းမှတ်တိုင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ ဘီယာစတေရှင်က ရဲမှူးကြီးသမီး ပိုင်တာဖြစ်ပြီး၊ ကောင်မလေးတွေကိုဝင်ဖမ်းတာ တခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဆိုင်ကကောင်မလေးတွေက နေ့လည်ပိုင်းမှာစားပွဲထိုးလုပ်၊ ဆိုင်ရဲ့ ဝေယျာ ဝစ္စတွေလုပ်ပြီး ညရောက်မှ အော်ဒါလိုက်ကြတာပါ။ အဲလိုဆိုင်မျိုး တောင်၊ မြောက်လမ်းဆုံက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ တူမပိုင်တဲ့ ဆိုင်လည်း ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာအလွန် အန္တရာယ်ကြီးလာတဲ့ HIV ၊ AIDS ရဲ့ ပင်ရင်းဌာနတွေထဲက တခုပေါ့။ဆင်ခြေဖုံးတွေမှာ ဘီယာစတေရှင်တွေတော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့များလေ ဆိုင်တွေမှာအရက်သောက်သူတွေများ လာလေပါပဲ။ ကျမ သူငယ်ချင်းရဲ့ သားလေးက ၁၀ တန်းအောင်ပြီး အလုပ်ဝင်လုပ်ပါတယ်။ သူ့အလုပ်မှာ တခါတရံ ဘီယာတိုက်တာ မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲမှာ အလုပ်သမားတွေလျော့လိုက်တော့ အဲဒီကလေး ပါသွားပါတယ်။ အလုပ်တွေ ထပ်လျှောက်ပေမဲ့ အလုပ်မရတဲ့အခါမှာ ကလေးကစိတ်ဓါတ်ကျပြီး နေ့တိုင်းလိုလို ဘီယာဆိုင်မှာ သွားသောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုး ဒုနဲ့ဒေး ပါ။ရပ်ကွက်ကျောင်းတွေရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ မြေကွက်အပိုတွေရှိနေ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအကွက်တွေမှာ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲရဲ့ ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဆိုင် ခန်းတွေဆောက်ပြီး ငှားတာရောင်းတာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ် ဆိုင်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကမြင့်တော့ တော်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဝယ်ဖို့ ငှားဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ အခုလိုလုပ်ငန်းတွေ အရှုံးပေါ်နေ တဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို လျော့ချနေကြတာ ပါ၊ ဒီတော့ အမြတ်များတဲ့ အရက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကပဲ ငှားရမ်းကြ တာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းတွေရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာ စား သောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘီယာဆိုင်တွေ ဝိုင်းနေပါတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်း စည်းမစောင့်ကြပါဘူး အဖြူ၊ အစိမ်းတွေနဲ့ ဘီယာဆိုင်ထဲဝင်ရင် မောင်းမထုတ်ပါဘူး၊ ရောင်းပေးလိုက်ကြ တာပါပဲ။ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေထဲမှာ အရက်ဘီယာသောက်သုံးမှုတွေ များလာပါတယ်။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အ ထက်တန်းကျောင်းမှာ အရက်မူးပြီးရစ်တဲ့ကျောင်းသားဆိုတာ မတွေ့ဖူး၊ မကြားဖူးပါဘူး။ အခုတော့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်း သားတွေအရက်မူးလို့ ပြဿနာတက်တဲ့အကြောင်းတွေ ခဏ ခဏ ကြားနေရပါတယ်။ကျမ စာသင်တဲ့ကလေးတွေ သူတို့အချင်းချင်းပြောနေတာကို ကျမ ကြားခဲ့ရတာပါ။ သူတို့က ရေသန့်ပုလင်းထဲကရေကို ဆေးထိုအပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး၊ အရက်ဖြူကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ပဲ ပြန်ပြီးစုပ်ထည့်လိုက်ပြီး စာသင်ခန်းထဲမှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရေသောက်သလို သောက်နေတာတဲ့၊ ဒါနဲ့ ကျမက မနေနိုင်လို့ အဲဒါဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ ခပ်ဆိုးဆိုးတွေကတော့ သောက်နေတာပဲ တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့အညွန့်ဖူးတွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အရက်သောက်တတ်နေပြီဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ဘာတွေဖြစ် လာမလဲဆိုတာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။နောက်တမျိုးကတော့ စာသောက်ဆိုင်တွေပါ။ အဲဒီအထဲမှာ အရက်ပုန်းဆိုင်တွေလည်း ပါဝင်ပြီး။ အစိုးရဖွင့်တဲ့ CS-4 ဆိုင်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ကျမတို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ အပေါစားအရက်တွေကို ရောင်းချပေးတာပါ။ ပြည်တွင်းထုတ်အရက်တွေဟာ အမျိုးစား များသလို တံဆိပ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ ပြီတော့ အရက်ကြော်ငြာတွေကလည်း ဘယ်သွားသွားမလွတ်ပါဘူး။ အရက်ကိုတော့ ကြော်ငြာခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အရက်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ စစ်အစိုရနဲ့ပက်သက်တဲ့ လူတွေချည်းပဲကိုး၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အရက်ခိုး ချက်တဲ့လူတွေဟာ ရဲကို တနင့်တပိုးပေးထားကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။ဒေါက်တာနေဝင်းက ကျမကိုပြောပြဖူးတယ်။ အရက်မှာ မီသိုင်းအယ်ကိုဟောနဲ့ အီသိုင်းအယ်ကိုဟောဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိတယ်တဲ့၊ မီသိုင်း ဟာ အဆိပ်ဖြစ်ပြီးတော့ သူချည်းပဲသောက်ရင် ချက်ချင်းကိုသေစေတယ်တဲ့၊ သန်စင်တဲ့အီသိုင်းရဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့်ပေါင်းခံချက် လုပ်ရတာကြောင့် သန့်စင်တဲ့ အီသိုင်းဟာဈေးကြီးတယ်တဲ့၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားအရက်တွေဟာ တန်ဖိုးကြီးနေတာပေါ့တဲ့၊ သန့်စင်တဲ့ အီသိုင်းဟာ လူကိုစွဲလမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းပဲ စွဲလမ်းစေတယ်တဲ့၊ အလွန်အကျွံသုံးစွဲရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ limit သုံးစွဲရင်ကျန်းမာရေးကို ထောက်အကူပြုတယ်တဲ့။ ဒေါက်တာကိုယ်တိုင်က Grand Royal လို အရက်မျိုးကို limit နဲ့ သောက် တဲ့ သူပါ။ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းကထုတ်လုပ်တဲ့အရက်တွေဟာ သန့်စင်တဲ့ အီသိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ အတော်လိုသေးတဲ့အပြင် မီသိုင်းရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းကလူတွေ ဆေးရုံကို တရာကျော် ရောက်လာပါတယ်။ အားလုံးဟာအဆိပ့်သင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ပါ အတော်များများလည်း သေဆုံးသွားပါတယ်။ စစ်ဆေးကြည့်တော့ မီိသိုင်းရာနှုန်း တော်တော်များများပါတဲ့ အရက်ကိုသောက်မိလို့တဲ့။ ဒီအဖြစ်ပျက်တွေမှာ လူတွေသေဆုံးကုန်ကြပေမဲ့ ဘယ်သူကိုမှ အ ရေးမယူသလို ဘယ်အရက်ဆိုင်ကိုမှ ပိတ်မပစ်ပါဘူး။အရက်ဆိုင်တွေဆိုတာက ရဲတွေရဲ့ စီးပွားရေးစစ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး ကြံ့ဖွံ့တို့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့ငွေတွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရက် ဆိုင်ဆိုတာ သူတို့တတွေရဲ့ဒေါက်တိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်ဖြစ် ဒေါက်တိုင်တွေကိုတော့ ရိုက်မချိုးကြပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးဟာ အရက်ကြိုက်တဲ့သူအဖြစ် အလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ တကယ့်အကောင်းစား အရက်တွေကိုသောက်ပြီး အသည်းဆရာဝန်တွေနဲ့ ထပ်တလဲလဲပြသပြီး သူရဲ့ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်နေပေမဲ့၊ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအ တွက် ပြည်တွင်းထုတ်အရက်တွေကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးတာတို့၊ မြှင့်တင်တာတို့လုပ်ဖို့ကို စဉ်းကိုမစဉ်းစားတာကတော့ အသေအ ချာပါပဲ။ပြည်တွင်းထုတ် အရက်ဖြူတွေဟာ အရမ်းကိုဈေးပေါပါတယ်။ တပုလင်းကို ၄၀၀ ကျပ် ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီအရက်တွေရဲ့ ပုလင်းခွံတွေပေါ်မှာ ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘယ်တော့မှ ဖော်ပြလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပြင်းအားကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ဖော်ပြ မထားပါဘူး။ အဲဒီလို ဘာမှန်းမသိတဲ့အရက်တွေကို မော်ဒလ်မတွေက မလုံ့တလုံ ဝတ်ပြီး တုံးလုံးပက်လက်လှဲပြီး ကြော်ငြာကြပါတယ်။ အဲဒီ ကြော်ငြာတွေက ရန်ကုန် တမြို့လုံး အနှံအပြားပါပဲ။ ဘယ်စာပေစိစစ်ရေးကမှ မစိစစ်ပါဘူး။ ကြော်ငြာလွတ် လပ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။နအဖ ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကို အစီအစဉ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတာပါ။ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲမွဲတေလေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေး အဖက်ဖက်က ပျက်စီးနေလေ၊ သူတုိ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ခိုင်မြဲစေဖို့ ကျကျနနလုပ်ဆောင်နေတာက သေချာပါတယ်။အရက်ဖြူထက် ပြင်းအားများပြီး၊ ဈေးလည်းပိုပေါတဲ့၊ အန္တရာယ်လည်းကြီးတဲ့ အရက် အမျိုးအစားတွေကိုလည်း ကြော်ငြာအားကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ လစ်ကွာ၊ စပျစ်ဝိုင်၊ နာနတ်ဝိုင်၊ မကျည်းဝိုင်ဆိုတာတွေပါ၊ ဝိုင်ဆိုလို့ အပျော့စားလို့ မထင်ပါနဲ့ အဲဒီ အမျိုးအစားဟာ ဘီယာမတ်ခွက်တခွက်ကို အရက်ဖြူတပိုင်းနဲ့ညီမျှပါတယ်။ အရက်ဟာ ရေရောသောက်လို့ရပြီး လစ်ကွာတို့ဝိုင်တို့ ဟာ ရေရောဖို့မလိုတဲ့အတွက် ပြင်းအားတိုင်းရင် အရက်ထက်ပိုပြင်းအားများပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားမှာ ကြော်ငြာမျိုးစုံနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရောင်းချနေတာပါ။ တခွက်ကို ကျပ် ၁၅၀ ပဲ ကျသင့်တော့ ဈေးလည်းတော်တော်ပေါပါတယ်။ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူတွေကတော့ စစ်အုပ်စုနဲ့ပက်သက်ရာပက်သက်ကြောင်းတွေပါပဲ။ ဘယ်ကျန်းမာရေးဌာန ရဲ့ စစ်ဆေးချက် အာမခံချက်တွေ မရှိပါဘူး။အရက်ကိုသောက်လိုက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်ထဲကို အောက်ဆီဂျင်အရောက်နည်းသွားလို့ လူဟာ တဖြည်းဖြည်းမူးလာတာပါ။ အရက် ဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမူးပြီး၊ အဲဒီ လစ်ကွာဆိုတာကတော့ ချက်ချင်ဆောင့်ပြီး မူးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲကို အောက်ဆီဂျင် အရောက်နည်းသွားအောင်လုပ်တဲ့ရာနှုန်းက လစ်ကွာကပိုများပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လစ်ကွာသောက်တဲ့လူတွေဟာ အာရုံကြောရော ဂါကိုပိုပြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေတဦးဟာ အရက်ကို limit နဲ့ သောက်တတ်တဲ့လူပါ။ သူက လစ်ကွာတွေပေါ်လာတော့ ပိုဈေးချိုပြီး၊ ပိုမူးလို့ လစ်ကွာ ကို သောက်ပါတယ်၊ လစ်ကွာကိုသောက်ပြီး နောက်တနေ့ မနက်မှာ အာရုံကြောတွေဟာ ထိုင်းမှိုင်းနေတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီးသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသောက်ရင်းကနေ အာရုံကြောရောဂါ စဖြစ်လာပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့လက အာရုံကြောတွေ အလုပ်မ လုပ်ဘဲ သေတဲ့ရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ မသိရပါဘူး။အရက်မူးလာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းအသိစိတ်ပျောက်ပြီး မသိစိတ်ကလွှမ်းမိုးလာပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒုစရိုက်အမှုတွေကို ကျူးလွန်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ပါဘူး။ အရက်မူးတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေ၊ ဒုစရိုက်မှုတွေ ထူထပ်ပေါများလာပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အရေးတော်ပုံမှာတွေ့ရပါတယ်။ သံဃာနဲ့ကျောင်းသား ပြည်သူတွေကိုပစ်တဲ့ ရဲတွေ၊ စစ်သားတွေဟာ တစုံတရာမူးနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ မူးမူးရူးရူးနဲ့ အသိမဲ့ရန်လိုစွာ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်နေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။HAWK အဖွဲ့က ကိုအောင်ဆွေဦး (ကွယ်လွန်) ပြောပြခဲ့ဖူးတာက၊ သူတို့ ဝမ်းခမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းက သူတို့အဖွဲ့က တောင်ကုန်းပေါ်က နေစီးပြီး ပစ်နေတာတဲ့၊ အောက်ကတက်လာတဲ့ နအဖ(န၀တ) ရဲဘော်တွေဟာ ကမူးရှူးထိုး အသိမဲ့ အတင်းတက်လာတယ်တဲ့၊ နောက်ဆုံး အပေါ်ကပစ်တဲ့လူက သနားပြီးမပစ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော် အတော်များများဟာ ကလေးစစ်သားတွေဖြစ် ပြီး အရက်တွေကိုမူးနေအောင် တိုက်ထားတယ်တဲ့။အဆုံးသတ်တော့ နအဖ ဟာ သူရဲ့အာဏာခိုင်မြဲရေးအတွက် ပြည်သူတွေကို မှိုင်းအမျိုးမျိုးတိုက်ပါတယ်။ အရက်ကြိုက်သူတွေကို အ ရက်မှိုင်း၊ ငွေကြိုက်သူကို လောင်းကစားမှိုင်းတွေနဲ့ ဖျက်ဆီးထားပါတယ်။ သူတို့ ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ အာဏာခိုင်မြဲ ရေးပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Posted by LRDP at 5:39 PM3comments Links to this post
ယခုနှစ် ဧပြီလ(၂၉)ရက်နေ့က မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
မှ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော ”ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း“ကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ အပြည့်အ၀ထောက်ခံကြောင်းနှင့် အဆိုပါကြေညာစာတမ်း၏အရေးကြီးပုံကို ဂျပန်အစိုးရနှင့်တကွ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ဂျပန်အလုပ်သမားသဂ္ဂများအပါအ၀င် ဂျပန်လူထုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများပါ သဘောပေါက်လက်ခံလာပြီး အားပေးထောက်ခံမှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတရပ် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟုသိရှိရသည်။နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်(တနင်္လာနေ့တွင်)ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ”ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း(သို့)လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအကျပ်အတည်းမှထွက်ရပ်လမ်း”(Gateway to National Reconciliation in Union of Burma)ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်သည်။ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုသန့်ဇင်ဦး(NLD-LA JB)မှ ”အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စုံညီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲအပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းဟာ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် အဓိကအရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍလို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီကြေညာစာတမ်းဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပေါ်ထွန်းရေးအတွက် တခုတည်းသောထွက်ရပ်လမ်းလို့ မြင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ နအဖရဲ့ မတရား ဖမ်းဆီးဖိနှိပ်များအောက်မှ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ကြာအောင် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် မဆုတ်မနစ်သောဇွဲ၊ လုံ့လများနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာကို ဂျပန်အစိုးရနှင့်တကွ ဂျပန်လူထုသိရှိနားလည်ဖို့နှင့် ဒီထက်ပိုမိုပြီး အားပေးထောက်ခံမှုရရှိလာစေဖို့နဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့ တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေ အပြည့်အ၀အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်စေဖို့အတွက် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်…”ဟု ရှင်းပြသည်။နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ AIPMC(ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus)မှ တာဝန်ခံများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားအစရှိသည့် အာရှနိုင်ငံများမှ သံတမန်များအပြင် အီးယူ၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမဏီအစရှိသည့် အနောက်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ သံတမန်များပါ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ဂျပန်အစိုးရပိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာ့အရေးကို ထောက်ခံအားပေးနေသည့် ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များသမဂ္ဂမှ အမတ်များအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဆင့်မြင့်တာဝန်ခံများတက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များမှ မြန်မာပြည်အပေါ်ထားရှိသည့် ဂျပန်အစိုးရ၏သဘောထားများကို ပြောကြားမည်ဟုလည်းကိုသန့်ဇင်ဦး၏ ဆက်လက်ရှင်းပြချက်အရ သိရှိရသည်။ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့် A.I, Human Watch, PFB, ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ(RENGO)မှ တာဝန်ခံများ၊ မြန်မာ့အရေးလည်း တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။အပြန်အလည်ဆွေးနွေးပွဲတွင် NCGUB မှ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးခွန်မြင့်ထွန်းမှ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း၏ အရေးပါပုံကို ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဟုသိရသည်။ယခုပြုလုပ်မည့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာမင်းညိုမှ”ကျနော့်အမြင်ပြောရင် ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေအခြေခံပြီး နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူး။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုလည်း အကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တက်ရောက်လာတဲ့ ဂျပန်အစိုးရပိုင်းမှ အမတ်တွေနဲ့တကွ နိုင်ငံတကာသံရုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေပါ သိရှိသွားကြလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်း နိုင်ငံတကာက လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းသာလျင် လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းအတွက် ထွက်ပေါက်လို့ အားလုံးကသဘောပေါက်လာကြပြီး နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေကို လက်ခံဖို့ ဖိအားပေးလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်…”ဟု ပြောဆိုသည်။ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ(RENGO)အဆောက် အဦတည်ရှိရာ တိုကျိုမြို့၊ ချီအိုဒါရပ်ကွက်ရှိ SOHYO KAIKAN ၏ ဒုတိယထပ်တွင် နံနက် ၉း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအထိ နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ပထမပိုင်းအစီအစဉ်တွင် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊ လက်ရှိ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ မြန်မာပြည်အပေါ်ထားရှိသည့် ဂျပန်အစိုးရ၏သဘောထား၊ AIPMC ၏သဘောထား၊ ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်၏သဘေားထား၊ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နေသည့် ဂျပန်လွှတ်တော်သမဂ္ဂ၏သဘေားထား အစရှိသည်တို့ကို ဂျပန်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာဖြင့် ပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးပွဲပုံစံလိုမျိုးပြုလုပ်၍ တက်ရောက်လာကြသည့် သံတမန်များ၏ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းအပေါ် ၄င်းတို့၏အမြင်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားမည်ဟုလည်း သိရသည်။ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှ ဦးအေးသာအောင်တို့ပေးပို့လာသော အမှာစကားများကို ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်သည်။မြန်မာ့အရေးစိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပြီး အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်ဆောင်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၃၀)ကျော်စုစည်း၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရသည်။
Posted by LRDP at 5:45 AM0comments Links to this post
အိုင်အယ်အို (ILO) ရဲ့ COVENTION တွေကိုအမျိုးမျိုးချိုးဖောက်နေတဲ့ SPDC
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ ဥပဒေဖြစ်သောလွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း
Posted by LRDP at 6:53 PM0comments Links to this post
ကျမ ဒီနေ့အလုပ်တာဝန်တွေ ညနေပိုင်းထဲက နားပြီး ခြေလက်ဆန့် ကာ သတင်းနားထောင်ဖြစ်တယ်။နားထောင်၇ုံမက
ကြည့်လည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီအခါ မနေ့ ကဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဆောင်ပါးထဲက ရဲဘော်တစ်ယောက်ခံစားပြီးရေးထားတာ နည်း
တောင်နည်းသေးတယ် လို့စိတ်ထဲ ဒေါပွသွားတယ်။။ ပုသိန် င၀န်မြစ်သဘောင်္ာမှောက်တာကို န အ ဖ လှူတဲ့သတင်း
စစ်အုပ်စု က ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ (ဒီကနေ့ ၂၀-၁၁-၂၀၀၉) မှာကျရောက်တာကို နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း
တွေ ကြေညာပေးသွားတယ် ။။အော် ၈၈၈၈ (၇ှစ်လေးလုံးရဲ့အသက်သွေးတွေ ဘ၀တွေပေးခဲ့တဲ့ကြားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီဒီယာရယ်--
တွေ ကြေညာပေးသွားတယ် ။။အော် ၈၈၈၈ (၇ှစ်လေးလုံးရဲ့အသက်သွေးတွေ ဘ၀တွေ ပေးခဲ့တဲ့ကြားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီဒီယာရယ်--
Posted by LRDP at 10:25 AM 1 comments Links to this post
အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းများကို ပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက် မည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သော်လည်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သတ်၍စစ်အုပ်စုဟာ
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် ILO တို့မှာ နှစ်စဉ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများရေးထိုးပြီး အဓမ္မ
လုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းများကို ပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက် မည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သော်လည်း စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ပိုင်းက
သာဂတိဂ၀က်များပေးပြီး ပြည်နယ်တိုင်းတို့ တွင်၇ှိသော အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်
အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခံရသူများ၏ တိုင်ကြားချက်များအားထိရောက်စွာမဖြေရှင်းပေးခဲ့ပေ။ ILO(ရန်ကုန်ရုံး)သို့ တိုင်ကြားသူ
များ ကိုလည်း ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများပြုနေသလို အောင်လံ မြို့ တစ်မြို့ တည်းပင် လယ်သမားပြဿနာ နှင့်
ရန်ကုန် ILO ရုံးသို့တိုင်ကြားသော သူ ၁၈ ဦး ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် မှ ၉ လအထိ အကျဉ်းကျဆဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အသက်၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးစစ်သားတွေအဓမ္မစုဆောင်းနေတာတွေလည်းပိုလို့ ပင်တိုးပွါးနေပါတယ်
ဒါတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေမဲ့ ILOGoverning Body အစည်းအဝေးမှာမနေ့ ကမြန်မာပြည်အရေးဆွေးနွေးဖြစ်
ခဲ့ပါတယ်။။ (Governing Body)နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျမ အကျဉ်းလေး၇ှင်းပြပါမယ် ။။
ILO အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့(The Governing Body) သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အစည်းအဝေးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး(ILO) ညီလာခံ
ချုပ်ခန့် အပ်ခြင်းနှင့်ရုံး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလမ်းညွှန်မှုပြုခြင်းတို့ ကိုဆောင်၇ွက်ခြင်းအခြေခံဖြင့်အလုပ်သမားစံနှုန်း
အပြင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဦးတည်ချက်ဖြင့်အဖွဲ့ အစည်း(၃)ရပ်ကိုဖွဲ့ စည်း
အဲဒီ့အဖွဲ့ တွေကတော့ (၁)ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆုံးဖြတ်မှုများဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ 
(၃)လွှတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့ စည်းခွင့်ဆိုင်ရာကော်မတီတို့ဖြစ်ပါတယ် ။။
ဒီကော်မတီတွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေအတွက် ပြဿနာဖြေ၇ှင်းပေးဖို့ ရာ
ခိုင်မာစွာရပ်တည်နေသလို မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း အသက်အန္တယယ်ကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီး
ILO ရုံးစိုက်ထားတာ သိနိုင်ပါတယ်။။ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ မိုက်မဲစွာပဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းကြီးအပေါ်ကိုတောင်အလေး
မထားပဲ လှည့်ဖျားနေကြတဲ့အတွက် ယခုလ ၁၈ ရက်မှာကျင်းပပြီးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ ကတော့ မြန်မာစစ်အုပ်စုအပေါ်ကိုယုတ်မာ
မှန်းပိုလို့ သဘောပေါက်လာပါပြီလို့ ကျမယူဆပါတယ် ။။ကျမတို့ တစ်တွေကလည်းနိုင်ငံတစ်ကာအဖွဲ့ အစည်းတွေအားကိုပဲမမျော်
ပဲ ကိုယ်တိုင်ဆောင်၇ွက်ရမှာက မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ ပြောရုံ တင်ပြရုံပါပဲ ကာယကံရှင်တွေကမတင်ပြရင် ကူညီချင်သူ
တွေအဖို့ ကိုင်တွယ်ဖို့ သိတ်မလွယ်လှပါဘူး။ တိုင်ရင် တင်ပြရင် အဖမ်းခံရမှာပဲ လို့ဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုတော့ ကြိုးစားပြီး
ရင်ဆိုင်ကြရပါမယ် ။ စစ်အုပ်စုဟာ နိုင်ငံတစ်ကာဥပဒေ စံနှုန်းတွေ သဘောတူညီမှုတွေ ချိုးဖောက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေပေမဲ့ဒါဟာ
ကာလအ၇ှည်ကြီး ပြုမူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က ခေါင်းငုံ့ ခံနေရင်တော့သားစဉ်မြေးဆက် ခံနေရမှာပါပဲ ။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်သမားလယ်သမားထုနဲ့ ပြည်သူကို ကျမ အကြံပြုချင်တာကတော့ အလုပ်သမားတွေ လယ်သမားတွေ မိမိအခွင့်
အရေးတွေ ကို တောင်းယူပါ အဓမ္မခိုင်းတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရရင်လည်းတင်ပြပါ ရန်ကုန် အိုင်အယ်အိုရုံးရှိသလို အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ အလုပ်သမားလယ်သမားရေး ဌါနမှာလည်း တင်ပြနိုင်ပါတယ် ။မိမိကလေးတွေ စစ်ထဲ အတင်းအသွင်းခံရ
တာကအစ တရားမ၀င်ပါဘူး ။ဒါကိုမြန်မာပြည်သူတွေ အတော်နားလည်လာပြီလို့ လည်းကျမ ယုံကြည်ပါတယ် ။ အထူး မတ်ဆိတ်
ပေးချင်တာကတော့ ILO ကနေ ICJ ကို တင်ပြပြီး ကုလသမဂ္ဂ မှာစစ်အုပ်စုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အရေးယူနိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် ဘယ်ဗီဒိုအာဏာ
နဲ့ မှပယ်ချလို့ မရသလို (အဲ--သတိရလို့ ထဲ့ပြောရဦးမယ် ဘယ်အဝေးရောက်ဝန်ကြီးချုပ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) ရဲ့ လက်မှတ်မှမလို
ပါဘူး။။ ဒီတော့ မတရားမှုတွေ ကိုဖြေ၇ှင်းပေးမဲ့ အလုပ်သမားခုံရုံးကြီးကနေ မြန်မာပြည်ထဲ က မတရားမှုတိုင်စာတွေ ၇ှိမှ စစ်အုပ်
စု ကိုအပြတ်အသတ်မောင်းထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သတိထားမိကြဖို့ နဲ့အလုပ်သမားထုအခွင့်အရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြစို့ 
Posted by LRDP at 6:05 PM0comments Links to this post
စစ်အုပ်စုသတင်းစာ ပြည်သူကို မက်ဆိတ် ပေးနေပြီ မီးဒုတ် မီးဒုတ်ရှို့ရှို့ တဲ့ (နောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်)
ကိုမိုးသီးဇွန် ရဲ့ ၈၈ စိတ်ဓါတ်တွေ နဲ့နိုင်ငံတစ်ကာရောက် ရဲဘော်ရဲမေ တွေဖြစ်တဲ့ ဖထီးဖဒိုမန်းရှာ ရဲ့ သမီးငယ် ဇိုရာဖန်း ဗကသ ဇော်ဇော်အောင် တို့ နဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့ပုံလေးပါ ။။ အားလုံးရဲ့စိတ်ခန္တာတွေမှာစစ်အုပ်စု အပြတ်တိုက်ရေးကိုပဲ အာရုံရှိနေသ
၍ တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးမဲ့ တစ်နေ့ရကိုရ ရမှာပါ ။။ မေအိခင် လယ်ဝေး
Posted by LRDP at 10:32 AM0comments Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင်မှ စစ်အုပ်စုအား သနားညှာတာစွာ ရွှေတံတားခင်းပေးနေပြီ -
ရက်စွဲ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားမှုများကို ရုတ်သိမ်းရေးကိစ္စ နောက်ဆက်တွဲ တင်ပြခြင်း။
၁။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက အမေရိကန်နိုင်ငံ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကတ်ကင်းဘဲနှင့်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိစဉ် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမှုအတွှက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ခဲ့သော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဖယ်ရှားရေးအတွက် ကျမ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းရ်ူ ပိုမိုသိရှိလိုကြောင်း တင်ပြချက်အပေါ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက လိုအပ်သော စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြလိုပါ သည်။
၃။ အခြားနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျမ အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
၄။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဧ။် လုပ်ငန်းများပိုမိုထိရောက်စွာဆောင် ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့ ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်အဖွဲ့ ဝင်များအားလုံး ကိုကျမဧ။်နေအိမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးလိုပါသည်။ ကျန်းမာရေးအရ မိမိတို့ နေအိမ်အသီးသီးတွင်သာ နေထိုင်လျက်ရှိကြသော ဥက္ကဌဦးအောင် ရွှေ၊ အတွင်းရေးမှူးဦးလွင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်ဦးလွန်းတင်တို့ ကို ၄င်းတို့ ဧ။်နေအိမ်အသီးသီးသို့ သွားရောက်ဂါဝရပြုကန်တော့ပြီး၊ (၁) ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး၊ (၂) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်များဖြစ်ကြသော (၃)ဦးဝင်းတင် (၄) ဦးခင်မောင်ဆွေ (၅) ဦးသန်းထွန်း (၆) ဦးစိုးမြင့် (၇) ဦးလှဖေ (၈) ဦးညွန့်ဝေ တို့ပါဝင်သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေးကို ကျမ၏နေအိမ်တွင်ကျင်းပရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သဘောတူညီချက်ရယူရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၅။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ စုံညီတွေ့ဆုံပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမည့် လုပ်ငန်းများကို ကျမအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ကျမအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိမည့်လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် တွေ့ဆုံတင်ပြခွင့်ပြုပါရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by LRDP at 8:44 AM0comments Links to this post
တပ်မတော်ထဲ မှာ အရာရှိအရာခံ အကြတ် စစ်သည်
တွေ အောက်ခြေက တပ်သားလေးတွေ သိတ်ကိုလေး
စားချစ်ကြည်ရတဲ့ သူထဲမှာ ဘဘဦးတင်ဦးကဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းနဲ့ မခြားပါဘူး။စစ်ခွေးနေ၀င်းကို သတ်ဖြတ်
ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တဲ့ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်ကို နုတ်စောင့်
ခြင်းနဲ့ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ် သူကိုယ်တိုင်စစ်ဦး
စီးချုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ အဲဒီ့ အချိန်ထဲ က နေ၀င်း ကိုသတ်
မဲ့ သူရဲကောင်းတွေအပေါ် ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့သူပါ။ ဗိုလ်
မတော်မှာ ဒီလို မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေလည်းရှိနေတယ်
မမြင်နိုင်မသိနိုင်ပေမဲ့ပေါ်ထွက်လာဦးမယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။ ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့ အန်တီ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို
ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။ ကျမမမေ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့(၁၃)နှစ်
အမျိုးသားနေ့ ကဆို ဘဘအိမ်မှာ မီးမီးရယ် ကျမရယ် မြတ်သန္တာစိုးရယ် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ကို ဘဘ
ဦးကြည်မောင် ဦးဆောင်မှုနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြတာ (ခုထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ကိုမျိုးခင်ကြီးကဇာတ်လိုက်
မင်းသားကြီး)ပေါ့ ။။နောက်ထပ် မမေ့တာ က ကျမ နိုင်ငံရေးရဲ့ ပထမဆုံးအဖွဲ့မျိုးချစ်တပ်ဦးလူငယ် ကို ဘဘ
သန္ဒေတည်ပေးခဲ့တယ် ။ကျမတို့ မျိုးချစ်တပ်ဦးရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသူရ(တန့်ဆည်အမတ် ဒုဗိုလ်မှုးကြီးကျော်စန်း)
ရဲ့သားကို မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တယ် ။ NLD ရောက်မှ ဘဘ ရဲ့ ကြည်ညိုစရာသဘောထားတွေ ကိုသိထားရ
တာမဟုတ်ပဲ သမိုင်း က ဘဘ ကိုြ့ကည်ညိုလေးစားစေခဲ့တာပါ၊)
ဘဘ ဦးတင်ဦး က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူ ဘာ့ကြောင့်အကျယ်ချုပ်ထားတာလဲ? ကျန်တဲ့စီအီးစီတွေကို
တော့အပြင်မှာပဲထားပါလား ? လို့ သုံးသပ်မိကြပါလိမ့်မယ် မသုံးသပ်မိရင်လည်းသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှာ ဘဘဦးညွှန့် ဝေက လွှဲရင် တပ်နဲ့ ကင်းတဲ့ သူ မရှိပါဘူး အန်တီစုတောင်မကင်း
ဘူး ရဲဘော်လေးတွေ လက်ထဲကြီးပြီး တပ်မတော်ဖခင်ကြီးကမွေးခဲ့တာ မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဒါ့ပြင် ဖက်စစ်ဂျပန်
တော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းကပါခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လေး အောင်ရွှေ ဆိုသူ လည်း ၇ှိတာပဲ တကယ့် မျိုးချစ် တပ်မတော်က
လာခဲ့တဲ့ ပုဂိုလ်တွေကြည့်ပါပဲ ။။ ဒီအထဲမှာမှ ဘဘဦးတင်ဦးလို ဥပဒေ ကြေညက်တဲ့ဗုဒဓ အဘိဓမ္မာကြေညက်
တဲ့ လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာနဲ့ ယှဉ်ပြီး မတရားမှုတွေ ကို တရားဓမ္မတွေ နဲ့ဗုဒဓ ရဲ့ လက်တွေ့ ကျတဲ့တရား
တွေနဲ့သွန်သင်ဆုံးမပြီး နှစ်ရှည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် နေနေရတာ တစ်ချိန် က တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တစ်ဦး
ဒါဆို ဘာ့ကြောင့် သူ့ကိုမှရွေးပြီး အကျယ်ချုပ်ထားလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ၇ှင်းပါလ်ိမ့်မယ်။ ဦးတင်ဦးဟာစစ်ခေါင်းဆောင်
လုပ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ။တရားဓမ္မနဲ့ ပြည့်ဆုံတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်၊ ဥပဒေ ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဥပဒေရဲ့အထက်
ကနေမတရားလုပ်နေသမျှကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထောက်ပြပြီးစစ်အုပ်စုကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ သူမို့ ပါ ။။ဒါ့ ထက်ပိုပြီး
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ကတော့ လက်တစ်ဆုတ်စာစစ်အုပ်စုမှလွဲပြီး တပ်မတော်သား အားလုံကို စည်းရုံးနိုင်သူဖြစ်
တဲ့အပြင် လက်ရှိ စစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့ အရာ၇ှိ ဗိုလ်မှုးဗိုလ်ချုပ် ကြီးငယ် တို့ ဟာ ဘဘဦးတင်ဦးအပေါ်မှာလေးစား
ကြည်ညိုမှု အများကြီး၇ှိနေသေးတာကြောင့် ဘဘ ကို ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် နဲ့ ကိုကင်းကွာစေခဲ့တာပါ ။ ဒီအခြေ
အနေကို သုံးသပ်ကြခြင်းအားဖြင့် ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့ အတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးရင်ဖြင့် စစ်
သားတွေ ၂၀၁၀ မှာလမ်းမမှားဖို့ဘဘ တို့ အချိန်မှီထိမ်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
ဘဘနဲ့ ဘဘဇနီးတို့ ရွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ --
Posted by LRDP at 6:40 PM2comments Links to this post
အမျိုးသားနေ့(ရဲရဲတောက်ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲ အဲဒါ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ )
Posted by LRDP at 5:40 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:17 AM0comments Links to this post
စစ်အုပ်စုစနက်ကြောင့် ၂၀၀၁ ဇူလှိုင် ၁၂ ရက် နေ့ မှာသာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင်းကျဆုံးသွားခဲ့
ရတဲ့ ကိုစည်သူ ရေ ကျမတို့ လို ဘ၀တူအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကအမှတ်ရနေတယ်ကိုစည်
ဒီကနေ့ ကိုစည်သူ ရဲ့မွေးနေ့ ပါ သာယာဝတီထောင်မှာစစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အုပ်စု ရဲ့လက်ကိုင်ဒုတ်ဆရာဝန်
ရဲ့ မသမာမှုတွေကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရရှာတဲ့ ကိုစည်သူ ကို ကျမနဲ့အတူ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကိုစည် ဆိုပြီးအ
မှတ်တရ ရှိနေမဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ပိုပြီးတမ်းတသတိရနေရှာမှာကတော့ ကိုစည့်ကိုမွေးထားတဲ့မိခင်
ကြီးပေပဲပေါ့ ။သားလေးကို ထောင်ဝင်စာ ၁၀နှစ်ကျော်တွေ့ ဆုံပြီး ကျမ်းမာအောင် မောကြီး ပမ်းကြီး
နယ်ထောင်မှာထောင်ဝင်စာမပြတ်တွေ့ ခဲ့တဲ့ ကိုစည့်မိခင်နဲ့ ကိုစည့်အကို မိသားစုတွေဟာ ကိုစည်သူ
ကို ပြန်ဆုံဆည်းခွင့်မရလိုက်ကြရရှာဘူး ။ဒီလိုပဲ အပြင်ရောက်ရင် ပြန်ဆုံကြရမယ်လို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့သူ့
ရဲ့ရဲဘော်ညီ ညီမငယ်တွေ နောင်တော် တွေနဲ့ လည်း ပြန်လည်ဆုံဆည်းခွင့် ကိုစည်သူမှာမရလိုက်ရှာ
ဘူး ။သူ့အသက်ကိုခြွေသွားတာ ပြင်းထန်တဲ့သာယာဝတီထောင်ရဲ့ ရာသီဥတုရယ် ထောင်ဆရာဝင်ရဲ့
စနစ်တကျကုသမှုမ၇ှိတဲ့အပြင် ရောဂါ မစစ်ဆေးပဲဆေးဝါးတွေ ဖြစ်သလိုအွန်မှုရယ်နဲ့ နှစ်စေ့ထောင်
ဒဏ်ကျခံပြီးသူကို ပြန်လွှတ်ရမှာကြောက်လို့၁၀(က) ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ နဲ့ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းထားမှု
ရယ်ကြောင့် ပါ ။။
ကျမ သာယာဝတီထောင်မှာရှိနေစဉ်မှာပဲ အဲဒီ ၁၀(က) နဲ့ ထပ်အဆွဲ ခံထားရတဲ့သူတွေ
ထဲ က ဦးအောင်မေသု(ကိုးကိုးကျွန်းပြန်) နဲ့ ကိုစည်သူနှစ်ယောက်ကျဆုံးခဲ့ရပြီး ကိုဌေးကြွယ်ကတော့
ထောင်ထဲက ချီးသေး လောင် တဲ့ အရွက်တွေ စားခဲ့ရလို့ သံကောင်ထ ဗိုက်အောင့်မှုကို အူခေါက်ပါ
တယ်ဆိုပြီး မှားယွင်းစွာ အခွဲစိတ်ခံခဲ့ရပါတယ် (ကိုဌေး ကတော့ ဖိုးသက်ပြင်းပေမို့ ပေါ့) ဒီလိုပါပဲကျမ
အမျိုးသား ကိုယဉ်ထွေး ဆို လည်း အဲဒီ ၁၀(က) တိုက်မှာအနာရောဂါမျိုးဆုံ နဲ့ ကံကောင်းလို့ မသေ
တာလို့ သူပြောပြခဲံ့ပါတယ်။ အမှန်ဆို ကိုစည်သေမယ်လို့ သူမထင်ဘူးတဲ့ သူသေနိုင်တာလို့ ပြောပြ
ဖူးပါတယ် ။ သာယာဝတီထောင် ကတော့ အသေအပျောက်အကျအဆုံးအများဆုံးထောင်ဆိုတာသိ
ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ် ။ ကိုဂါမဏိ (ဦးအောင်စိုး) ညီ ကိုအောင်ကျော်မိုး ၊ ကိုညွှန့် ရွေ တို့ အပြင် ကျ
ဆုံးခဲ့သူတွေ မှဒု နဲ့ ဒေး ပါ ။ ဒါ စစ်အုပ်စုဟာဒီလူတွေ ကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သေဒဏ်ပေးခဲ့တာပါ
ကျမကိုယ်တိုင် ငှက်ဖျား ဖြစ်နေချိန်မှာ တီဘီဆေး အွန်တာကို ခံခဲ့ရဖူးပါတယ် အဖျား ၁၀၆ တက်ခါ
မှ ဆရာဝန်က သေလုပြီဆိုပြီး ငှက်ဖျားဆေး လာတိုက်တာပါ ။စေတနာထားလို့ အသက်ချမ်းသာစေ့
ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ အာပြဲ နဲ့အော်ပြီးဆန္ဒပြကြမှာဆိုးလို့ ပါ ။ ဒီလိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာမတရားနှိပ်
စက်တာတွေ စိတ်ကိုသတ်တာတွေ ဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကြီးပါပဲ ။
ခုလည်း အပြစ်မဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလမ်းပေါ် တက်ခဲ့ပြည်သူ
ကို ဟောပြောပြခဲ့တဲံ့ မီးမီကို ပုသိန်ထောင်ကနေ ဒါထက် ဝေးတဲ့ အရပ်ကို ရွေ့ပြောင်းပြစ်ပြန်ပါပြီ။
ဒါတွေဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စစ်အုပ်စုက ဒီမို လမ်းကြောင်းပေါ်လျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သက်
သေပါပဲ ။ ကျမအရမ်းစိုးရ်ိမ်ပါတယ်မမာမာဦး လေးလေးမွန် စုစုနွေး နီလာသိန်း မီးမီး နီမိုလှိုင်စတဲ့
နုနယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ဘယ်လို မှထောင်ထဲ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု အသက်၇ှင်သန်ဖို့ မလွယ်ပါ
ဘူး။သခင်ဇင် ရဲ့ဇနီးဟာထောင်ထဲမှာနှစ်တွေ ကြာတဲ့အခါ အပြင်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်မှုကိုယုံ
ကြည်ချက်နဲ့ပဲ ပေးဆပ် လိုက်ကြရပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကိုစည်သူလို ကျဆုံးခဲ့သူတွေ ကိုသက်နိုင်ဦး
လို ညှင်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရသူတွေ အတွက် ကျမ ဘယ်သောအခါမှ တရားခံ တွေ ကို ခွင့်လွှတ်
မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ၂၀၁၀ ညီလာခံ နဲ့ မလုပ်နိုင်ခင် ပြည်သူ ခုံရုံးတက်ဖို့ သာစစ်အုပ်စု ပြင်ဆင်သင့်
ကျမတို့ တတွေ ဟာဒီလို အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ ကိုစည်သူတို့ လို ရဲဘော်တွေ အာလုံးကိုသတိရနေ
တယ် မကြေနပ်ဘူးဟေ့ လို့ ပြောနေရေးနေရုံ နဲ့တော့ မပြီးပါဘူး သူတို့ တွေ ကျဆုံးသွားတဲ့အတွက်
သူတို့ ရည်ရွယ်ချက် ကို ပါကျမတို့ က ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ပေးရမယ် သူတို့ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်မှု
တရားမျှတမှုတွေ မြန်မာပြည်မှာအစစ်အမှန် ပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျမတို့ က ပို ပြီးစွမ်းဆောင်ကြ
အားတက်သရော လုပ်ကြတဲ့အခါ ကိုစည်သူ နဲ့ အတူ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ဝိဥာဉ်
တွေဟာ ကြေနပ်အားရနေကြရှာမှာပါ ။အဲဒီအခါ သူတကယ်မသေဘူးပေါ့
ကိုစည်ရေ MEK ကတော့ ယုံကြည်ရာလမ်းအတိုင်း လျောက်မြဲ လျောက်စဲ ပါ ။။။။။
Posted by LRDP at 9:00 AM3comments Links to this post
ထိုင်းအစိုးရ က ကမ္ဘောဒီးယားရှိ ထိုင်းသံအမတ် ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီ
Thailand recalls its ambassador to Cambodia in protest at Phnom Penh's appointment of fugitive politician Thaksin Shinawatra as economic adviser to the Cambodian government.အောင်မိုး/ဂျေရာပွန်သော်မဆင်ဘန်ကောက်၊ ထိုင်းအဂတိ လိုက်စားမှု ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံရမည်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အဆင့်မြင့် တရားရုံးတော်က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သပ်ခ်စင် ကို ကမ္ဘောဒီးယား ၀န်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က သူ့ရဲ့ စီးပွားရေး အကြံပေး အတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကမ္ဗောဒီးယားအစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ် ဘုရင့်အမိန့် ပြန်တမ်းနဲ့ခန့်အပ် လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရ ရဲ့ ကြေညာချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကမ္ဘေဒီယား ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ထုတ်ဖော်ပြသ သွားခဲ့တယ်။ဒီလို ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ကို ထုတ်လွှင့်ပြသပြီး မကြာခင်မှာပဲ ထိုင်းအစိုးရ က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ထိုင်းသံအမတ် ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့လိုက်ကြောင်း ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ်က သတင်းထောက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သပ်ခ်စင် ဟာ အပြစ်ဒဏ် ကို လက်မခံပဲ၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့တယ်။ အခုလို ၀ရမ်းပြေး သပ်ခ်စင် ကို အကာအကွယ်ပေး လက်ခံမှုပြုတာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရေးစီရင်ထုံး စံနစ် နှင့် ထိုင်းပြည်သူတွေကို စော်ကား လိုက်တာသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သံတမန်ရေး အရ လိုအပ်တဲ့ လက်တုန့်ပြန်မှု ကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ်က သတင်းထောက်များ ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား ၀န်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် အနေ နဲ့ ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီဒယား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို အဓိကထားမလား၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သပ်ခ်စင် နဲ့ သူ့အကြားဆက်ဆံရေးကိုသာ အဓိက ထားမလားဆိုတာ ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ် လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခဲ့တယ်။ ဒီရာထူးခန့်အပ်တာဟာ ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ သူသာ ကမ္ဗောဒီးယားမှာ အခြေချနေ တယ်ဆိုရင် သပ်ခ်စင်ကို ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးဖို့ တွန်းအားပေးတာပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ ထိုင်း ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် SUTHEP THAUGSUBAN က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာထူးခန့်အပ်မှု ကြောင့် ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တင်းမာ လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
Posted by LRDP at 7:18 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 9:38 PM0comments Links to this post
မွေးနေ့ မှာ ကင်း ပုံကြီးတင်ထားပါလား မကဲ့ရဲ့ နဲ့ နော့
ထောင်ထဲက အုပ်ပက်ကြားတွေမှာတစ်ပုံကြီးပဲသူ့ သွားထိ
အိမ်မှာရှိတဲ့ သေပြီးသားအလှဆင်ထားတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်
ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ (၅) မှာ ကျမ ၃၇ ပြည့်ပါပြီ တနှစ်ပိုကြီးသွားတော့ ယုံကြည်ချက်ပို ခိုင်မာလာတာပေါ့ မွေးနေ့ 
ဆိုရင် အမေ သိတ်နာကျင်ခံစားရမှာ သမီးလေးနှစ်ယောက် ကို မွေးခဲ့တဲ့ကျမ ပိုပြီး နားလည်လာတယ် မေမေကနုနယ်
တယ် ကျမလို့ အကြောတင်းမှမဟုတ်ပဲ ။ ဘလော့ကာ မိတ်ဆွေတွေ ကျမတို့ ဘ၀လေး ကြုံတုန်း -သိရအောင်
လယ်ဝေးမြို့ လယ်ဝေးဆေးရုံမှာ (၇)ရက် ဗိုက်နာ နေတဲ့ ကျမမိခင် ၀မ်းထဲကနေ ကျမ်းမာစွာပဲ ကျမ လူ့ လောကထဲ
ရောက်ခဲ့တယ် မေမေ ဗိုက်နာတာ တနင်္ဂနွေ တစ်ပတ်လည်သွား တယ်တဲ့အဖိုး က သူ့ သမီး ကျမမေမေ ကိုသနား
လွန်းလို့ကျမ ကိုတောင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ မေမေ့အဖွါး လယ်ဝေးသူ ဒေါ်စောခင် ကဆို ကျမ သိတက်စအရွယ်ထိကျမ
ကိုစိတ်ဆိုးကောင်းတုံးပဲ ။ဒီအဖြစ်သနစ်တွေ မေမေပြောပြခဲ့လို့ ခု ပြန်တွေးမိတိုင် ငါ မာကျောကျော ဖြစ်တာ ဒါ့ကြောင့်
လားပဲ လို့ တွေးမိပြန်တယ် ။ အဲ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ကိုယ့်မွေးရက် ကို ပြောမိကြပြန်ရင်လည်း သူတို့ က ကျမဖွါး
ဇာတာ က စကော်ပီယမ် ဖွါးမို့ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်တာတဲ့လောကကြီးမှာ စကော်ပီယမ်ဖွါး လို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ 
လူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ ။ ထပ်တူဘယ်ကျပါ့မလဲ ဒါပေမဲ့ ကျမ ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကော်ပီယမ် လို့ ပြောရတာ သိတ်
သဘောတွေ့ နေတယ် ။ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုရင်ကျမ ကို လူတွေ က မွေးနေ့ မေးတဲ့ အခါစကော်ပီယမ်ဖွါးလေလို့ ပြော
မိနေပြီးသားပဲ ။။ သူ့ ဖာသာသူများ ကို လိုက် စော်ကားတက်သူမဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်ကို လာစော်ကားရင် ကင်းလိုပဲ
အဆိတ်ပြင်းတယ်ပေါ့ ။။ ဒါက ကိုယ့် မာန် ကလေးကို ရိုးသားစွာဖေါ်ပြတာပါ ။
မွေးနေ့ ရောက်တဲ့မနက် မိုးလင်းထဲ က မေမေ့ ကိုသတိရနေတယ် စိတ်ထဲ ငိုချင်သလိုပဲမေမေကဘယ်ဘ၀ မှာလဲလို့ 
တွေးမိတယ် ။ အဖေကို ပိုချစ်တဲ့သမီးက ဒီနှစ် အမေကိုပို မြင်ယောင်နေမိတယ် ။ကျမအတွက်တော့ထူးခြားတယ်ပေါ့
နံနက်ပိုင်း အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲချက် ရင်း စိတ်ထဲမှာ အမေ နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
မေမေ့အကြောင်းလေးရေးမယ်လို့ရည်ရွယ်မိလိုက်တယ် ။ မေမေ က လယ်ဝေးမြို့ မျက်နှာဖုန်း တွေ ဖြစ်တဲ့စိန်
မြင့်မြင့် ဆေးလိပ်ခုံပိုင်ရှင် တို့ ရဲ့ သမီးကြီးပါ သိတ်ပြီးသိမ်မွေ့ ပါတယ် (ကျမနဲ့ တစ်ခြားစီပါ) စကားပြောရင်ကျယ်
ကျယ်မပြောဘူး ။ အမိအဖကို သိတ်ရိုသေတယ် အိမ်ထောင်ပြုတာတောင် အဖွါးပေးစား သူကိုယူခဲ့တာပါ ။ မေမေက
အဲဒီ့ခေတ် က (၇)တန်း အောင် ပေါ့။။အနုပညာဗီဇလေး၇ှိတော့ ရန်ကုန်မြို့ပန်တျာ ကျောင်း တက်ခဲ့တယ်။
အကနည်းပြဆရာမ ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ လက်ကလေးတွေများ ပျော့ပြောင်းပြီး ကိုယ်လုံးလှလှလေးပေါ့ (ဒါလည်းကျမနဲ့ 
တခြားစီ)ဖြစ်ပြန်ရော ပြီးတော့ ကျမနဲ့ ခြားနားတာထပ်ပြောရရင် မေမေ ကသိတ်စိတ်ပျော့တာ ၀မ်းနည်းသိတ်လွယ်
တာ ခံစားချက်ကိုတော့ ဖေဖေ ဒုံမင်းတီးသံ ကြားက ထွက်လာတဲ့ မေမေ့သီချင်းသံတွေ ကသက်သေပါပဲ ။ခု ကျမ
မြန်မာသံစဉ်တွေ ဆိုမိလိုက်တိုင်း လူကြီးသူမတွေအံ့သြ ကြတာ မေမေ့ဆီက ကြားခဲ့ရတဲ့ နားရည်ဝမှုတွေပါပဲ ။
တိမ်တမံ တို့ နတ်ရှင်နောင်(ရတု) တို့ငွေလ၀န်းဘယ်ကျွန်းမှာသာ တမ်းတလို့ မေ့မှာမျော်ရတာ ဆိုတဲ့သံစဉ်တွေ
ဟာမသင်ပဲ ရခဲ့တဲ့အမေ့အမွေပေါ့ ။ မေမေ့အကြောင်းပြောတော့ ဖေဖေ့ အကြောင်းချန်ထားလို့ မရပြန်ပါဘူး။။
ဖေဖေ ကတော့ ကျမသိတ်လေးစားအထင်ကြီးရတဲ့ဘ၀ရှင် ကြီးပါပဲ ။ ကျိုထီးရိုးတောင်ကိုလှမ်းဖူးလို့ ရတဲ့ ကျိုက်
ထိုမြို့ ရွာငယ်လေးတစ်ရွာက လယ်လုပ်သူ သာမာန် မိသားစု ကမွေးလာပြီး လယ်မလုပ်ချင်လို့ ရန်ကုန် ပုရွက်ဆိတ်
ကုန်း က အဖိုးဘုန်းကြီး ဆီမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလုပ်ပြီး ၁၀တန်း အောင်အောင် ပညာသင်ခဲ့ရသူပါ။ဖေဖေက
အမြင်သိတ်ကျယ်ပါတယ် ။ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာ လူ့ အဆင့်မဟုတ်ဘူးသမီး - အသိတရားကြီးမားဖို့ ပဲကြိုးစား
ဖို့ ဖေဖေ လမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဖေဖေ ကအနုပညာသိတ်ဆန်တယ် လို့ ကျမ မထင်ဘူး ဒါပေမဲ့ ဒုံမင်း ပညာမှာ
ဖေဖေ့ ကိုတော်ရုံလူမယှဉ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ကြိုက်တဲ့ သီချင်းကြီးသီချင်းခံကို ဖေဖေ တီးနိုင်သလို ကျမ ကိုလည်းသီချင်း
ကြီးတွေ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတက်စေ့ချင်ပါတယ် ။ ကြည့်ပါဦး ကျမတို့ မိသားစု အမေ က BBI မှာအနုပညာနည်း
ပြဆရာမ အဖေ က လေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး (UBA) မှာ (ဘာအဆင့်လည်းကျမ မပြောတက်တော့ဘူး)သူ
တို့ ဟာ မဆလ လက်ထက်က ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ကျမတို့ မိသားစုလေး က မရှိမရှား နေရတဲ့ဘ၀ပေါ့ ။ ဒါပေ
မဲ့ တမိသားစုလုံး အနုပညာ နဲ့ထုံလွှမ်း နေပြီးငြိမ်းချမ်းခဲ့တယ် လို့ ပြောရမှာပါပဲ ။ အဖေ စန္တယားခုံကြီး နဲ့ 
ဒုံမင်း တီး ကျမ ကဘေးကရပ် ဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ အိမ်ေ၇ှ့မှာတန်းစီလို့ ကို နားထောင် ကြတာကျမ
မှတ်မိနေပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့မေမေ က အသက် (၃၈) မှာ ကျမတို့ ကိုကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ်။နိဂုံးသတ်
လိုက်ပါတော့မယ် ကျမ ကို လူလောကထဲ ကို မေမေ ပို့ ပေးခဲ့စဉ် က ဖြူဥနေလို့ပိုးလိုမွေးသတဲ့ မေမေက
ကျမကို ပိုဟပ်ဖြူ ကြွေရုပ် လေး လို့ ခေါ်သတဲ့ ၊လယ်ဝေးကနေ ရန်ကုန်ကို အမြန်ရထားကြီး နဲ့ ရက်သမီးလေး
မှာပြန်ခေါ်လာတော့ ရထား ပေါ်မှာ ပုခက်ဆင်ပြီး ရထားတတွဲလုံးက ၀ိုင်းချစ်ကြတယ်တဲ့ အော်လိုက်တာ အသံ
ကိုပြဲနေတာပဲလို့ကျမအဖွါးက ခုထိ ပြန်ပြန် ပြောပြတုန်း။ ခုတော့ အိုက်သမီးက စစ်အာဏာရှင်ကို ၁၅ နှစ်
သမီးထဲက တိုက်ခဲ့ရတဲ့သူပုန်မကြီး ဖြစ်နေတာ မေမေသိရင်ဖြင့် မျက်ရည်လေးတွေ နဲ့ငါ့သမီး ဆိုပြီး ခုဖေဖေ
(ကျမ်းမာရေးယိုယွင်းနေတဲ့) သူများတွေကိုကြွားပြီးပြောနေသလို့ငါ့ သမီးကွ လုပ် ချ သမီးလုပ်တာမှန်တယ်
လို့ပြောပါ့မလား -- မြေးလေးတွေကိုတောင် ကောင်းကောင်းသိမသွားရှာတဲ့ ကွယ်လွန်သွာတဲ့ ကျမ မိခင်
ကို နောင်ဘ၀ကျရင် ပြန်ဆုံပြီး ကျွေးမွေးပြုစုချင်ပါဘိ ။ လို့တွေးရင်း လူဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့မေမေ့
ကို ကာယကံဝစီကံမနော့ နဲ့ ပြစ်မှားမိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ရင်း မွေးဖွါးပေးခဲ့တဲ့ မိဘ နှစ်ပါးအတွက်ရည်
ရွယ်ပြီးသံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ် လေးစားကြည်ညိုရတဲ့လူကြီးမိဘ တွေ ကို မိမိ အသက်ရှည်ဖို့ သက်၇ှည်
အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲဆွမ်းလေး လှူဒါန်မှုပြုခဲ့ပါတယ် ။သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ
Posted by LRDP at 10:09 PM5comments Links to this post
တန်ဆောင် တိုင်ပွဲ နဲ့ အတူစစ်အာဏာရှင် ဆန့် ကျင်တဲ့စာရွက် လေးတွေ နဲ့ 
ဒီကွန်ယက် ဟာ ၂၀၁၀ ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့် ကျင်ဖို့စုရုံးမိကြတာပါ ။
မွန် ၊ ရခိုင် ။ ကယန် ၊ ကရင် နဲ့ဗမာ တိုင်းရင်းသား တွေ အများအပြားစု
စည်းထားပြီး ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ပါ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီ
ကွန်ယက် လှုပ်၇ှားမှု တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လွိုင်ကထုံည မှာ ခုတင်ပြ
ထားတဲ့ စာတန်း ကို မြန်မာပြည်သား တွေ ကြားဖြန့် ဝေခဲ့ ကြပါတယ်။။ မွန်
ကယန်း နဲ့မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ စာရွက် ကို
မြန်မာဘက်ကထောက်လှန်းရေးအပြင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ချို့အထူးစိတ်ဝင်စား
ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားတော်တော်များများ လက် ထဲ မှတော့ တန်ဆောင်
တိုင်ပွဲ နဲ့ အတူစစ်အာဏာရှင် ဆန့် ကျင်တဲ့စာရွက် လေးတွေ နဲ့ ပေါ့ ။။။။
Posted by LRDP at 9:00 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 1:00 AM0comments Links to this post